Burmese People: ယနေ့သတင်းစာ ပါ ဂန်ဘာရီ ခရီးစဉ် နှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ..
ယနေ့သတင်းစာ ပါ ဂန်ဘာရီ ခရီးစဉ် နှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ..
မစ္စတာဂန်ဘာရီ ၏ ယခုတခေါက်ခရီးစဉ်အတွင်း သြဂုတ် ၂၀ ရက်အစီစဉ်တွင် နံနံက် ၁၀ နာရီ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ ဆုံရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှတွေ့ ဆုံရန်ငြင်းပယ်ခဲ့ သည် ။ ထိုကြောင့် မစ္စတာဂန်ဘာရီက ကိုယ်တိုင်စာရေးသားပြီး တာဝန်ရှိသူများမှတဆင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပေးပို့ပြီးတွေ့ ဆုံရန်ကြိုးပန်းခဲ့ သည် ။သိုသော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ၎င်းစာကိုလက်မခံပဲ တုံပြန်မှု့ မရှိသည်အတွက် တာဝန်ရှိသူများမှနံနက် ၁၀ နာရီခွဲ မှ ၁၁နာရီ မိနစ်၄၀ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အနောက်ဖက် အုတ်တံတိုင်းမှ လက်ကိုင်အသံချဲ့ စက်ဖြင့်မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ မှ စာပေးလိုကြောင်း နှင့် လက်မခံနိုင်ပါက ခြံဝတွင် စာကပ်ထား မည့် အကြောင်းထပ်မံအကြောင်းကြားခဲ့ ပြီး ၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် မစ္စတာဂန်ဘာရီ၏ စာအားကပ်ထားခဲ့ ကြောင်းသိရသည် ။ ထိုနေ့ တွင်မစ္စတာဂန်ဘာရီ အနေဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန်အမျိုးမျိုးကြိုးသား ခဲ့ သည် ။
သိုသော် မစ္စတာဂန်ဘာရီ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ ဆုံနိုင်ရန်ထပ်မံကြိုးစား လိုကြောင်း တင်ပြလာသဖြင့်သြဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့နံနံက် ၇ နာရီမိနစ် ၅၀ တွင် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ၏ အဖွဲ့ ဝင်နှစ်ဦး ဖြစ်သည့် Mr. Erwan Pouchous နှင့်Ms. Hua Jiang တို့သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ တာ)န်ရှိသူများနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့သွားရောက်ခဲ့ သည် နံနက် ၈ နာရီ မှ ၈နာရီ ၂၅ မိနစ်အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နေအိမ်ခြံဝန်းရှေ့မှနေ၍ လက်ကိုင်အသံချဲ့ စက်ဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးအားလာရောက်တွေ့ဆုံ ပါရန် အော်ဟစ်၍ ဆက်သွယ်ခဲ့ ပါသော်လည်း တုံပြန် မှု့မရခဲ့ရှိခဲ့ ကြောင်းသိရ သည် ။
မစ္စတာဂန်ဘာရီသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ခွင့် မရခဲ့သဖြင့်NLD ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ နှင့်ထပ်မံ တွေ့ဆုံခွင့် တောင်ခံ ခဲ့ သောကြောင့်ထပ်မံ စီစဉ်ပေး ခဲ့သည် ဟု ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ ၏ သတင်းစာများတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ သည် ။
မစ္စတာဂန်ဘာရီ ၏ ကယောင်ခြောက်ခြား ရှင်းလင်းချက် …
မစ္စတာဂန်ဘာရီ မှ ယခုခရီးစဉ်အတွင်း လိုလိုသေး မရှိအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ပြီး ဧည့် ဝတ် ကျေပွန်ခဲ့သော မြန်မာ အစိုးရ အားကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ၊ မိမိ ခရီးစဉ်သည် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ စည် များနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထားကို ထင်ဟပ်ပြ သ ရာ ရောက် ပါကြောင်း ၊ မိမိနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အတွက်ကူညီကြိုးစားပေးခဲ့ သော နိုင်ငံတော် အစိုးရ အားကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ခွင့်မရသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း ၊ ဤသို့ဖြစ်ရသည် မှာ မြန်မာအစိုးရကြောင့် ရော ၊ မိမိကြောင့်ပါ မဟုတ်ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့ကြားတွင် သဘောတိုက်ဆိုင်မှု့များ ၊ မတိုက် ဆိုင် မှု့များ ရှိနေမည် ဖြစ်သော် လည်း နှစ်ဘက်ကြားတွင် အဆင်ပြေစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေ ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာ အစိုးရ အလိုရှိသည့် အချိန် တွင် မိမိလာရောက်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း စသည်…စသည်..တို့ကို ရောချသွားပါသည်..။
ကျော်ဆန်း ရဲ့ အတို့ အထောင် ….
ကျနော်တို့မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့ နဲ့ အဆွေတော် ( ဂန်ဘာရီ )ဟာ ယခင်သုံးကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ ပြီးယခုအကြိမ်သည် လေးကြိမ်မြောက် ဖြစ်သောကြောင့် ရင်နှီးပွင့် လင်း ခင်မင်စွာဆွေးနွေးတိုင်ပင် အမြင်ခြင်းဖလှယ်ခဲ့ ကြပြီးသည့်အတွက်တယောက် သဘောကို တယောက် နားလည် ပြီး တကယ့်မိတ်ရင်းဆွေချာ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒါကြောင့်ယခုစတ္ထုထ အကြိမ်တွေ့ ဆုံ မှု့မှာလည်း ယခင် တွေ့ ဆုံ မှု့များထက် ပိုမိုခင်မင်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာနဲ့ အမြင်ခြင်းဖလှယ် ပြီး အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေ ဆောင်ကကြည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည် မျှော်လင့် မိပါတယ် ။
……..အဆင့်လေးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အတည်ပြုမယ့်ဆန္ဒခံယူပွဲ မှာလဲနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာပြည်သူလူထုက အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဟာ ရှေ့ ဆက်ပြုလုပ်မယ့် မူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ် ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားရန်အတွက် ကိုလည်း အတည် ပြုလိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့်ယနေ့အခါ မှာမူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ် ရဲ့ ကျန်အဆင့်(၅) (၆)(၇) တို့ ကို လည်း အောင်မြင်ပြီးမြောက် အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။. အဆင့်(၅ )ဖြစ်တဲ့ ပါတီစံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက် ပွဲ ဆောင်ရွက်ရာမှာလဲ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရအောင် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ အဆွေတော်ပြောတဲ့ အားလုံးပါဝင်ခွင့် ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့့် အစီစဉ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့….။
( လူပုသလောက် ပလီတီးချောက်ချက် ပြောတတ်တဲ့ ကျော်ဆန်း ရဲ့ ဂန်ဘာရီးအား နှပ်ချ ပုံ….)
ရန်ကုန်သားရဲ့အမြင်…….
၁။ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး နှစ်ယောက် နှင့်စစ်အစိုးရ ဖက် မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် ရှေ့ ၊ နောက် တို့မှာ လက်ကိုင် အသံ ချဲ့ စက် ဖြင့်အလှုခံ လာ သလို အော်မခေါ် သင့်…….. အမှန်တကယ် ဖြစ် သင့်သည် မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နေအိမ် ခြံဝန်း ပါတ်ပါတ် လည် မှ ခွေးတိုးပေါက် တို့ကို ရှာ သင့်သည် ။ တွေ့ ရှိပါက ထို ခွေးတို့ပေါက် မှတဆင့်လေးဘက်ထောက် တိုးဝင် ကာ အတွင်းသို့ဝင်ရောက် ပြီး တွေ့ဆုံ ပါရန် အသနားခံ သင့်သည် ။
၂။ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူများမှ လဲ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ လို နုံအအ လူမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ သို့မလွှတ်သင့်။ လည်သူစား စနစ်ကြီးစိုးနေသော မြန်မာနိုင်ငံလို နေရာ မျိုး တွင် ဂန်ဘာရီလို လူရောက်လာသော အခါ နောက်ဆုံး မှာ ဆူးလေလမ်း က ပလီ တက်ပြီး ဆုတောင်းတာ ပဲ ရှိမည် ။ ဤ သို့ တက်ရောက် ဆုတောင်းခြင်း မှာ နအဖ ခေါင်းဆောင် များ သူ့ အပေါ်တွင် စိတ်မကွက် စေရန်ဖြစ်သည် ။ မှာလိုက်တာတမျိုး - လုပ်လာတာ တမျိုး နှင့် ဆိုသောအခါ နောက်ထပ်လာခဲ့ သည် ရှိသော် လေကြောင်း ကုမ္မဏီ များကို လုပ်ကျွေးသလိုဖြစ်နေမည် ။
၃။ ကျော်ဆန်းပြောတဲ့ ဆန္ဒခံ ယူပွဲအားနိုင်ငံ တကာစံနှုန်း နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်ဟုဆိုသော်…ရန်ကုန်သား တခုလောက်သိချင်ပါ သည် ။ နိုင်ငံတကာ ဆန္ဒခံ ယူပွဲ သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းများတွင် …မဲဆန္ဒ ပေးရာ ၌ (၁ ) မိမိမဲဆန္ဒ အားလူကြုံပေး၍ ရ ၊မရ ( ၂ ) ဆန္ဒမဲပေးရန် အိမ်ထောင်စုစာရင်း လိုက်လံကောက်ခံ ပြီးနောက် မိသားစုစာရင်း ပြန်လည် ထုပ်ပြန်ရာ တွင် အမှန်တကယ်ရှိသော မိသားစု ၀င် များသာမက ပဲ စစ်တပ်မှ (ဥပမာ- တကက အောင်သန်း ) စသည့် အမည် မျိုး လူပိုလူလျှံ များပါလာ၍ ရ ၊ မရ ။ ( ၃ ) ဌာနဆိုင်ရာ များ ရှိဝန်ထမ်းများအား နေထိုင်သော ရပ်ကွပ် တွင်း မဲမပေးစေပဲ သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များမှ ထုတ်ပေးသော အမှန်ခြစ်ပြီးသား မဲလက်မှတ်များတွင် လက်မှတ် ထိုးစေ ခြင်းမျိုး ရ ၊ မရ ။ ( ၄ )ရပ်ကွပ်များအတွင်း ရှိလမ်းလူကြီးများ မှ တအိမ်တဆင့်လိုက်လံ၍ ချော့ တခါ ၊ ခြောက်တလှည့်အေးဓါးပြ တိုက်ပြီး အမှန်ခြစ်ခိုင်းခြင်းမျိုး ရ ၊ မရ ။ ( ၅ ) နာဂစ် မုန်တိုင်း သင့်ဒုက္ခ သည် များအား အမှန် ခြစ်ပါ မှ ဆန်ပေးမည် ၊ နေစရာ ပေးမည်ဆို ပြီး အတင်း အဓမ္မ အမှန်ခြစ်ခိုင်းခြင်း မျိုးရ ၊ မရ ။ ( ၆ ) မုန်တိုင်းသင့် ဒေသ ရှိကျေးရွာ အများစု သည် မဲဆန္ဒ ပေး ပွဲ အား ထိုသူတို့ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ပဲ ရာနှုန်း ပြည့်ထောက်ခံ လိုက် ပါသည် ဆိုကာ ကြေငြာ ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်၍ ရ ၊ မရ ……စသည်တို့သည် နိုင်ငံတကာ စံ နှုန်းသတ်မှတ်ချက် များတွင် ပါဝင် ပါသလားဆို တာကို ရန်ကုန်သား သိချင်ပါသည်…။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 04:18
How nice idea of Yangon thar! So so crazy and so so stupid gambri!
24 August 2008 at 09:05
How nice idea of Yangon thar! So so crazy and so so stupid gmabri!
24 August 2008 at 09:06
ပြောမလို့လုပ်နေတာ ပြောသွားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် အမှန်တွေသိပ်မပြောနဲ့ ဂမ်ဘာရီ အူချာချာ ကျော်ဆန်းငကြောင်အကြောင်း လူသိကုန်လိမ့်မယ်
ယနေ့သတင်းစာ ပါ ဂန်ဘာရီ ခရီးစဉ် နှင့်သတင်းစာရှင...
သခင် ဖိုးလှကြီး ( ဒုတိယ ပိုင်း )